हिम्मतका पर्याय रूपचन्द्र- विचार - कान्तिपुर समाचार
‘जनता जाननीय भएका छैनन् भने उनका प्रतिनिधि पनि माननीय हुँदैनन् । जब जनता जाननीय हुन्छन्, तब उनका प्रतिनिधि माननीय हुन्छन् ।’
असार ७, २०७८ रामनारायण बिडारी
जननेता, थाहा अभियन्ता, नेपाली सुकरात हुनुहुन्थ्यो– रूपचन्द्र विष्ट । अत्यन्त इमान भएका व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो रुदाने (रूपचन्द्र दामन नेपाल), जोसँग यस पंक्तिकारले पनि सहकार्य गर्ने अवसर पाएको थियो, जुन जीवनमा गौरव गर्ने विषय बनिरहेकै छ । रुदाने विलक्षण हिम्मतको पनि मानौं पर्याय हुनुहुन्थ्यो ।
राजा वीरेन्द्रको जन्मोत्सव मूल समारोह समितिमा उहाँलाई पदेन सदस्य बनाइएको पत्र आयो । रुदानेले त्यसैको पृष्ठभागमा ‘आयोजक ! जिउँदो मान्छे अदालतमा लडिरहेको मुद्दा हो, यसको फैसला चिहानमा पुगेपछि मात्र हुन्छ— रापंसरू (राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य रूपचन्द्र)’ लेखेर पत्रवाहकलाई फर्काइदिँदै भन्नुभयो, ‘त्यसैले मैले आफ्नो जन्मोत्सव मनाउने गरेको छैन । जसले आफ्नो जन्मोत्सव मनाउँदैन, उसलाई अरूको जन्मोत्सव मनाउने हक हुँदैन ।’
यस विषयलाई लिएर पञ्चहरूले रुदानेलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनी पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिमा उजुरी हाले, र जन्मोत्सव समारोहमा त्यस्तै माग गर्दै भाषणसम्म गरे । पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिका अध्यक्ष नवराज सुवेदीले रुदानेलाई स्पष्टीकरण सोधे तर रुदानेले सो पत्रको पृष्ठभागमा लेखेको कुरा नै स्पष्टीकरण हो भनी जवाफ दिनुभयो । त्यो जवाफभित्र ठूलै सैद्धान्तिक, दार्शनिक र राजनीतिक कुरा छन् । कुनै मान्छे जन्मेका कारण समाज र मानव जातिलाई कति सकारात्मक प्रभाव पर्‍यो, त्यसअनुसार उत्सव मनाउने हो । नकारात्मक प्रभाव परेमा त शोक पो मनाउनुपर्छ । तर दुष्ट मनुष्यले पनि जन्मोत्सव मनाउने र अरूले हो–हो गर्ने प्रचलन किन बस्यो ? यो प्रश्नको उत्तर केक काटेर जन्मोत्सव मनाउनेहरूले दिन सक्छन् ? बुज्रुकले बलपूर्वक व्याख्या गर्न खोज्लान् तर औचित्य पुष्टि गर्न सक्दैनन् । निरंकुश राजतन्त्रमा चलेको कालो व्यवस्थामा त्यसका नायकलाई रुदानेले दिनुभएको उत्तर तत्कालीन शासकलाई कडा चुनौती नै थियो । अरू राजतन्त्रविरोधी भने त्यस्ता कार्यक्रममा नगए पनि मौन बस्ने गर्थे ।
यसै गरी बडामहारानीको जन्मोत्सवमा पनि रुदानेको नाममा एउटा पत्र आयो । स्मारिका प्रकाशन गर्न लागिएकाले बडामहारानीका बारेमा उहाँसँग एउटा लेख मागिएको थियो । रुदानेले त्यस हल्कारासँग एउटा कागज मागेर लेखिदिनुभयो, ‘ऐराल एक ठूली बढी आइमाई हुन् किनकि उनले राजासँग विवाह गरिन् । —रुदाने’
यसमा पनि कम आँटको कुरा थिएन । मै हुँ भन्ने नेताहरूले पनि यतिको साहस गर्न सक्दैनथे । यसमा पञ्चहरूले कराउन हिम्मत गरेनन् किनकि ‘ऐराल’ को अर्थ ‘ऐश्वर्यराज्यलक्ष्मी’ लगाउनुपर्थ्यो । अनि राजासँग विवाह भनेको कुन राजा ? श्री ५ महाराजाधिराज पो संवैधानिक राजा हुन्, अरू त सयौं राजा हुन्छन् नि ! यस्तै तर्क–वितर्क उठे । त्यसैले यस विषयमा पञ्चहरू हाकाहाकी अघि आउन सकेनन् ।
एक पटक रुदानेले राष्ट्रिय पञ्चायतभित्र दरबारविरुद्ध भाषणै गर्नुभयो, ‘सरकार, दरबारमा बसेकाहरूले अपराध र अन्याय गरे, जनता आपत्मा परे ।’ पञ्च रापंसहरूले तत्काल नियमापत्ति गरे, कारबाहीको माग राखे । अध्यक्षले रुदानेलाई स्पष्टीकरण दिन आदेश दिए । रुदानेले भन्नुभयो, ‘मैले भनेको कुरा सत्य छ । स्पष्टीकरण त सरकार दरबारमा बस्नेले दिनुपर्ने हो ।’ त्यसपछि सदनमा हंगामा नै भयो । मण्डले प्रवृत्ति भएका केहीले आवाज उठाए, ‘रुदानेले यो राजदरबारलाई भनेको हो । यस्तो भन्नेलाई कडा कारबाही गर्नुपर्‍यो ।’ फेरि अध्यक्षबाट आदेश भयो, ‘माननीय रूपचन्द्र विष्ट, प्रस्ट भन्नुपर्‍यो, यो के भन्न खोज्नुभएको हो ।’ रुदानेले फेरि जवाफ दिनुभयो, ‘दरबार त मुलुकमा धेरै छन्, सिंहदरबार, बागदरबार, सेतो दरबार, लालदरबार आदि । श्री ५ महाराजाधिराजको दरबार वा राजदरबारलाई राजप्रासाद पो भनिन्छ त ! यत्ति कुरा नबुझ्नेहरू चाकरी गर्न व्यस्त छन् । केही कारबाही हुन्छ भने जसले राजदरबार भन्ने शब्द जोडे, उतै होस् ।’ त्यसपछि सदनमा हाँसोको पर्रा छुट्यो । फेरि कसैले यसमा आपत्ति गर्ने आँट गरेन । वास्तवमा दरबारभन्दा सामान्य रूपमा जनताले राजदरबार नै बुझ्ने हो, कर्मचारी पनि दरबार नै भन्थे । रुदानेको मतलब पनि राजदरबार नै थियो । तर संसदीय अभ्यासमा रुदानेले वैधानिक रूपमा पुष्टि गरिदिनुहुन्थ्यो, उहाँका भनाइ जनताले बुझ्ने तर कानुनले नसमात्ने हुन्छन् भनी । उहाँको यो क्षमता पनि इतिहासमा स्मरणीय छ ।
अहिले आफूलाई माननीय भन्न रुचाउनेहरूको हूल बढ्दो छ । अझ सामन्ती सोच भएकाहरूले त सम्माननीय किन नभनेको भनी संसद्मा आपत्ति पनि गरेका छन् । ‘सम्माननीय’ शब्द राजतन्त्रसँग सम्बन्धित छ, सामन्त प्रथासँग सम्बन्धित छ जसरी ‘अधिराज्य’ भन्ने शब्द राजतन्त्रसँग सम्बन्धित छ । बेलायतले यसका लागि ‘राइट अनरेबल’ भन्ने चलन चलायो; ‘अपर हाउस,’ ‘लर्ड हाउस’ भन्ने शब्दावलीको प्रयोग गर्‍यो । यी सबै सामन्ती सोचका कुरा हुन् । रुदाने आफूलाई कसैले माननीय भनेर सम्बोधन गरे सोध्नुहुन्थ्यो, ‘जनता जाननीय भए ? यदि जनता जाननीय भएका छैनन् भने उनका प्रतिनिधि पनि माननीय हुँदैनन् । जब जनता जाननीय हुन्छन्, तब उनका प्रतिनिधि माननीय हुन्छन् ।’
सम्माननीय र जनतन्त्र शब्द विपरीत ध्रुवका हुन् । भारतमा प्रधानमन्त्रीलाई सम्माननीय भनिँदैन, राष्ट्रपतिलाई पनि भनिँदैन । चीनमा पनि भनिँदैन, अमेरिकामा समेत भनिँदैन । तर बेलायतमा भनिन्छ, किन ? जवाफ सामान्य छ— त्यहाँ राजतन्त्र छ । नेपालमा पनि राजतन्त्र हुँदा यस्तै भनिन्थ्यो । बेलायतको जस्तै प्रिभी काउन्सिलको सट्टामा यहाँ राजपरिषद् वा राजसभा थियो । त्यसका सदस्यहरूलाई सम्माननीय भन्ने प्रचलन राजाले बेलायतको सिको गर्दै बसाएका थिए । त्यसैले रुदानेले सदनमा कहिल्यै सम्माननीय शब्द प्रयोग गर्नुभएन । एक पटक यस विषयमा पनि रुदानेले राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्षलाई सम्बोधन गर्दा सम्माननीय भन्नुभएन भनी नियमापत्ति भयो । रुदानेले तत्काल अध्यक्षसँग समय मागेर भन्नुभयो, ‘माननीय अध्यक्ष महोदय ! यो सदनभित्र कोही पनि सम्माननीय छैनन्, सबै माननीयको हैसियतमा छन् । यदि कसैलाई सम्माननीय चाहिएको हो भने राजसभातिर खोज्न जानुपर्छ कि ?’ यस कुरालाई लोकेन्द्रबहादुर चन्दसहितका माननीयहरूले टेबल ठटाएर समर्थन गरेका थिए ।
एकचोटि ‘रातो युगधारा’ साप्ताहिकमा एउटा समाचार आयो— ‘यो बौलाहा व्यवस्था हो ः रापंसरू’ । यस विषयलाई लिएर सुशीला थापालगायतका एक दर्जन रापंसले पत्रिका देखाउँदै नियमापत्ति गरेर रुदानेलाई कारबाहीको माग गरे । रुदाने सदनमा आफैंले समय मागेर भन्नुभयो, ‘त्यो समाचारमा मेरो नाम जोडिएको रहेछ । त्यसमा जे लेखिएको छ, त्यो अक्षरशः ठीक छ ।’ त्यसपछि फेरि दर्जनौं रापंसले तत्काल कारबाही माग गरे । रुदानेले फेरि भन्नुभयो, ‘यहाँ अनेक व्यवस्था छन् । मनपरीतन्त्रको व्यवस्था, भ्रष्टाचारको व्यवस्था, यही सदनमा अनेक व्यवस्था छन् । मैले पत्रिकाको समाचारमा उल्लेख भएको व्यवस्थालाई बौलाहा व्यवस्था भनेको हुँ ।’ त्यस पत्रिकामा लेखिएको थियो— ‘जनताभन्दा जनप्रतिनिधि ठूला, जनप्रतिनिधिभन्दा कर्मचारी ठूला, कर्मचारीभन्दा प्रहरी ठूला, प्रहरीभन्दा अपराधी ठूला हुने यो व्यवस्था बौलाहा व्यवस्था हो ।’
त्यसपछि ‘अब त साबिती नै भएकाले पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिले कारबाही गरोस्’ भन्दै होहल्ला मच्चियो । पञ्चहरूले भने, ‘यो पञ्चायत व्यवस्थालाई नै भनेको हो ।’ रुदानेको जवाफ थियो, ‘मैले भनेको कुरा पत्रिकामै छ । पञ्चायत भन्ने शब्द जसले थपे, जे हुनुपर्ने हो उतै होस् ।’
(बिडारी संघीय सांसद हुन् )
प्रकाशित : असार ७, २०७८ ०७:११